Rahoviana i Apple no hanomboka ny iPad vaovao 10,5-inch? | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | iPad, iPad Pro, About us
Tamin'ny nanombohan'ny iPad vaovao tamin'ny taona 2017 dia toa nofoanana ny tsaho momba ny maodely vaovao, fa ny tena izy dia izany ny heverina ho iPad Pro Pro 10,5 santimetatra miaraka amina endrika tsy misy rafitra vaovao dia mbola velona, ​​velona satria efa manomboka ny famokarana azy, saingy ny daty fandefasana azy dia mbola tsy fantatra, na dia misy olona akaiky sasany aza mbola tsy manary ilay hevitra fa afaka mahita ny hazavana izy ireo raha vantany vao tonga ny volana aprily, na dia misy aza ny volana jona sy septambra isaky ny manana hevitra manohana azy ireo.
Voalohany dia nisy resaka momba ny fanombohana nandritra ny volana martsa tao anatin'ny fehezan-teny natokana indrindra ho an'ity iPad vaovao ity, zavatra izay efa heverina fa tsy ho vita mihitsy. Taty aoriana dia nisy resaka momba ny hetsika tamin'ny volana aprily, tao anatin'ny Apple Park vaovao ary nifanindry tamin'ny fitokanana azy. Noheverina ihany koa fa ny iPad vaovao dia azo aseho ao anatin'ny WWDC amin'ny volana Jona, na amin'ny volana septambra aza, miaraka amin'ny fampisehoana ny iPhone 8 vaovao. Ny zava-misy dia tsy misy amin'ireo daty azo inoana afa-tsy ny volana martsa no mbola voahilika araka ny filazan'ny manam-pahaizana na loharano akaiky ny orinasa aza.
Ny hetsika aprily dia mbola ao anatin'ny azo atao, na dia miharatsy aza izany, satria efa kely sisa ny fotoana ary manomboka fotsiny ny famokarana iPad vaovao, ka ho sarotra ny hanaovana fanombohana amin'ity lohataona ity. Ny mety hafa dia ny fampisehoana azy amin'ny volana aprily fa ny volana jona kosa dia natomboka, zavatra izay tena hafahafa satria ny zavatra lojika indrindra dia ny fanolorana azy avy eo amin'ny volana jona mivantana, na ny famoahana ny volana aprily dia voafetra ho an'i Etazonia sy ny firenena hafa misy fandrakofana bebe kokoa ao anatin'ny herinandro vitsivitsy rehefa nahatratra ny ambaratonga avo lenta ny famokarana.
Ny fihaonambe WWDC 2017 ho an'ny mpamorona dia mety ho toerana mety tsara hampidirana an'ity iPad vaovao ity. Fotoana ve hiresahana momba ny iOS 11 sy macOS 11? ary angamba ny iPad dia ho fampirantiana tonga lafatra hanehoana ireo fiasa vaovao amin'ny rafitra fiasa finday vaovao izay tian'i Apple hanombohana ity fararano ity Ho tonga lafatra izy io satria tadidintsika fa ny iPhone dia tsy haseho hatramin'ny volana septambra, mba hahafahan'ny iPad vaovao iray mampiseho vaovao manan-danja nefa tsy mila manambara na inona na inona momba ilay iPhone vaovao izay ho tonga amin'ny fararano. Fa rehefa heverina fa mila havaozina malalaka ny faritra Mac, angamba efa be loatra ny manampy ny fampisehoana iPad vaovao miaraka amina endrika nohavaozina tanteraka.
Ary farany manana ny fampisehoana ny iPhone 8 isika, azo vinavina tamin'ny volana septambra. Betsaka amintsika no mieritreritra fa fotoana mety indrindra hanolorana iPad vaovao misy endrika vaovao. Hanana iPhone 8 vaovao tsy misy frame isika, ary iPad Pro tsy misy frame. Ny fanolorana ny iPad Pro tsy misy sarany mialoha dia hanome fanazavana momba ny iPhone 8, ka raha te hitandrina ny fanantenana isika, ny zavatra tena mitombina dia ny fampisehoana azy roa tonta miaraka amin'ny fotoana iray..
Ny iPhone dia fitaovan'ny Apple flagship, ary tsy tian'ny orinasa hangalatra na inona na inona amin'ny iPad ny orinasa. Amin'izany fomba izany, ny iPad vaovao dia afaka mahazo tombony amin'ny fanovana rehetra amin'ny iPhone, toy ny tsy fisian'ny bokotra an-trano na ny fantsom-pifandraisana izay tafiditra ao anaty efijery.. Raha mamoaka ny iPad Pro haingana kokoa i Apple, dia azo antoka fa tsy hanana an'io fiasa io ireo satria te hamandrika azy ireo amin'ny iPhone ny orinasa. Apetraho ny filokanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Rahoviana i Apple no hanomboka ny iPad vaovao 10,5-inch?
Apple dia namoaka ny beta voalohany an'ny iOS 10.3.2, watchOS 3.2.2 ary tvOS 10.2.1
Swipeable, fomba iray mahaliana hanararaotana ireo rakikira Instagram